HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 9-JULY-2020
Thursday July 09, 2020 - 10:23:05 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweyne Farmaajo oo Billad Sharaf Guddoonsiiyey Xubno ka tirsanaa Guddi gii Qaban-qaabada 60-Guurada Madaxweynaha JFS Md.Maxamed C/hi Farmaajo ayaa casho Sharaf ku maamuu say Guddigii 7aadka Xoriyadda iyo Midnima da,hormuudka Olala ha Isxil
Madaxweyne Farmaajo oo Billad Sharaf Guddoonsiiyey Xubno ka tirsanaa Guddi gii Qaban-qaabada 60-Guurada Madaxweynaha JFS Md.Maxamed C/hi Farmaajo ayaa casho Sharaf ku maamuu say Guddigii 7aadka Xoriyadda iyo Midnima da,hormuudka Olala ha Isxilqaan iyo Maa mulka Warbaahinta gaarka loo leeyahay. Madaxweyne Farmaajo ayaa dul istaag ay dadaalka wadajirka ah ee shacabka iyo D/Soomaaliyeed ay ku bixinayaan dowlad dhiska, midnimada iyo soo celinta maqaam ka dalkeenna. Madaxweynaha ayaa adkeey ey in ololaha isxilqaan la sii dardar-geliyo si loo dhammeystiro goobaha haatan uu dhism ahoodu socdo, loona bilaabo mashaariic cus ub,isaga oo muujiyey in Ololaha Isxilqaan lo oga gol leeyahay in dadka Soomaaliyeed ay dib u dhisantaan xarumaha danta guud, kaa beyaasha dhaqalaha,soocelinta bilicda dalka Md.Farmaajo ayaa Billad Sharaf guddoo nsiiyey Wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maare eye, Wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye iyo Sa rreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac, taas oo ay ku muteysteen kaalintii mugga lahayd ee ay ka qaateen Olalaha Isxilqaan iyo qab an-qaabada 7aadka Xorriyadda iyo Midnima da.ummmadda soomaaliyeed Munaasabaddan waxaa sidoo kale kasoo qeybgalay R/Wasaaraha XFS Md.Xasan Ca li Khayre, W/Caddaaladda Md.Xasan Xuse en Xaaji, G/Maxkamadda Sare Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed, Wasiirro kale oo ka tirsan Xukuumadda, Saraakiil Ciidan iyo Ma amulka Gobolka Banaadir. DHAMMAAD
Khayre oo jimicsi u tagay Garoonka Stadium Muqdisho
Md.Xasan Cali Khayre, R/Wasaaraha So maliya ayaa gelinkii dambe ee Shalay jimicsi u tagay Garoon ka Stadium Muq disho, oo dhawa an uu xariga ka jaray Madaxwey naha JFS, ka dib markii in muddo ahba dib u habayn ballaaran lagu waday.
R/Wasaaraha ayaa la arkaayay isagoo ku ru cleynaya Garoonka Stadium Muqdisho, xilli uu barbar ordaayay Wakiilka Midowga Yur ub ee Somaliya, Nicolas Berlanga.
Ururka Midowga Yurub ayaa Dowladda Somaliya ka caawiyay dhaqaalaha ku baxay dib u habaynta ballaaran ee lagu sameeyay garoonka, oo burbur lixaad lixi ka soo gaa ray dagaaladii Muqdisho.Wakiilka Midowga Yurub ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in Ururka M/Yurub uu gacan ka gaysto soo noolleynta Garoon ka Stadium Muqdisho.
"Midowga Yurub wuxuu ku faraxsan yah ay inay gacan ka gaysteen dhaqancelinta. Waxaan ku faraxsanahay inaan helno sabab ihii caadiga ahaa, lagana gudbay bahdilaadda. R/Wasaare waad ku mahads an tahay oradkaagii Maanta.” Ayuu yiri Wak iilka M/Yurub oo warkan ku sheegay bartiisa Twitter-ka.
R/Wasaare Khayre ayaa qoraal uu isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxaa uu u qor naa "Somaliya waxay u baahan tahay Wada –hawlgalayaal ina garab taagan waqtiyada adag & waqtiyada wanaagsanba, kuwaa oo wadaagga himilada xasiloon, barwaaqo iyo midnimaba. Taageerada joogtada ah ee M/Yurub ayaad ku aragtay garoonkan burbu rka illaa dayactirkan cajiibka ah. Orodkeygii ugu horeeyay ayaa halkan waxaa i garab socda Nicolas Berlanga.”
Bahda cayaaraha ayaa si diiran u soo dha weysay dib u hawlgelinta Garoonka Kubad da Cagta ee Stadium Muqdisho, oo ah kan dalkeena ugu weyn.
Ururada Bulshada Rayidka ayaa bilaabay kulamo ay la qaadanayaan Madaxda ugu sa reysa dalka, Guddiga doorashooyinka iyo ax saabta siyaasadda, iyagoo doonaya in xal iyo is afgarad siyaasadeed laga gaaro khila afka doorashooyinka.
Guddoomiyaha Ururada Bulshada Rayid ka Tahliil Shaatax oo hoggaaminaya xubna ha Bulshada Rayidka ayaa Dorraad kulamo gaar gaar ah la qaatay Guddoonka 2da Aqal ee BFS Md.Maxamed Mursal Sh. C/raxm aan iyoMd. Cabdi Xaashi C/llaahi.
Kulamadan ayaa ku saabsanaa sidii is afg arad looga gaari lahaa doorashooyinka dal ka oo lagu mursan yahay, waxaana ay 2da guddoon ay u soo jeediyeen inay xaliyaan khilaafka dhexdooda ah.
Sidoo kale waxaa ay ururada bulshada rayidka la kulmeen Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaranka, waxaana ay la wa daageen in doorashada noqoto mid heshiis ku yihii n dhammaan dhinacyada siyaasada
Habeen ka hor ayay aheyd markii Urura da Bulshada rayidka ay la kulmeen Madaxw eyne Farmaajo, iyagoo ka wada hadlay arri maha doorashada iyo sida ay la tahay in khil aafka siyaasadeed loo xaliyo.
Ururada Bulshada rayidka ayaa la filayaa inay la kulmaan Xisbiyada Siyaasadda oo iy agana diidan doorasho hal dhinac uu wato oo aan heshiis lagu aheyn.
Ajandaha shirka M/Dhuusamareeb iyo waxa laga filan karo
Axmed Shire Falagle, Wasiirka Warfaaf inta Galmudug ayaa ka waramay ajandaha shirka lagu wado in maanta uu ka furmo M/ Dhuusamareeb iyo weliba waxa laga filan karo shirkaasi.
Wasiirka ayaa sheegay in ajandaha shir ka uu yahay, sidii ay isugu soo dhawaan lah aayen Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Maamul Goboleedyada, aragti mideys ana uga qaadan lahaayen arrimaha doora shooyinka. Wuxuuna intaa ku daray in ajand aha uu u badnaan doono wadatashi iyo ara gti mideysan oo dhinacyo ay ka qaataan doo rashooyinka lagu wado inay dalka ka qabs oomaan.
"Ajandaha shirka waxaa weeye, sidii So maliya wejiga siyaasadeed ee hadda ay jog to DF iyo dowladaha xubnaha ka ah isaga ar ki lahaayeen qaabka loo wajahayo doorasho oyinka, iyadoo si mideysan loo wada duulaa yo Dowladda Federaalka iyo dowladaha xu bnaha ka ah. Marka ajandaha wuxuu u ba dnaan doonnaa in si wada-tashiya iyo aragti mideysan la’isku dayo in laga qaato, sidii la yeeli lahaa.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka oo la hadlay BBC ayaa xaqiijiy ay in qorshuhu yahay in shirku uu socdo la ba illaa saddex maalmood, ayna suurtagal ta hay in maalin dheeri ah lagu daro amaba hal maalin laga soo yareeyo.
"Shirku wuxuu socon doonnaa 3maalmo od. 2 maalmood oo wadahadalka uu noqon doono iyo maalin soo dhaweyn ah. Marka la’ isku daro illaa 3maalmood ayaan ku talo jir naa. Inuu ka yaraado oo 2maalmood noqda na waa macquul, in maalin kalana lagu sii da rro waa macquul, maadaama uu yahay shir Soomaalida u gaara, oo aan hadda dad kale oo ajnabiya ku jirin. In aad la’isku xog warey sto waa u badnaan doontaa.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiir Falagle oo ka jawaabayay waxa ka soo bixi kara shirkan ayaa yiri "Waxaa la ga fillan karaa guul, Soomaali inaanan aya da la’isku soo jiid-jiidin ama khilaaf iyo dag aal uusan ka dhaxeynin, oo aayaha dalkoo du iyo sida ku aaddan isu wareystaan uun, meel-na ay isugu yimaadaan. Aanu wada-hadalno waa aan heshiino. Haataana dagaal kamu uu dhaxeeyee aragtiyo kala duwan baa laga yaabaa in la mideeyo. Waxa la fil laayana waa guul weyn, oo aan is leeyahay Somaliya oo dhan, waa ay aayi doontaa.”
Madaxweyne Qoorqoor ayaa gogol wad ahadal dhigay M/Dhuusamareeb, ka dib mar kii uu guul-dareystay shirkii Golaha Amniga Qaranka, ee Axadii lagu waday inuu ka fur mo Magaalada Muqdisho.
Taliska Ciidanka xoogga dalka oo soo saaray digniin ku socota Ciidamada
Taliska qeybta 27aad ee Ciidanka Xoog ga Dalka, saraakiisha booliska Hirshabeelle iyo maamulka Gobalka Shabelaha Dhexe ay aa socdaal wacyi galin ah ugu tagay ciidamo ka kala tirsan booliska Hirshabeelle iyo ku wa Madaxtooyada Hirshabeelle, kuwaaso dhawaan shaqaaqo ay ku dhex martay M/ Jowhar ee G/Sh/Dhexe.
Taliyaha booliska Hirshab eelle Xasan Dhici sow Xasan oo hadalo u bad naa wac yi gelin ujee diyay askarta oo hal goob kuwa da sugna xiliga ay booqan ayeen saraakiisha iyo mas’uuliyiinta, waxa na Taliyaha uu shee gay in Askarta looga ba ahanyahay in meel ay ugu soo wada jeestan la dagaalanka Al-Shabaab.
Taliyaha qeybta 27aad ee ciidanka Xoog ga Dalka Jenaraal Axmed Maxamed Tareedi sho ayaa sheegay in tallaabo adag ay ka qa adin doonaan askarigii ka qeyb gala dagaal qabiil, isla markaana ay maxakamadda ciida mada qalabka sida horgeyn doonaan
Ku-simaha Guddoomiyaha Gobalka Sha beelaha Dhexe ahna Guddoomiye kuxigeen ka 1aad ee Maamulka Gobalka Maxamed Cabdi Sheekh Xaandow ayaa qeybaha kala duwan ee saraakiisha kaga mahadceliyay xal u helidda shaqaaqadii dhawaan ka dhac day magaalada Jowhar
Amiir Maxamed bin Nayef oo wajahaya kiis halis ah oo uu diyaariyey Bin Salman
Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan ayaa wada in uu salka u dhigo ee do la xiriira musuq-maasuq iyo daacad darro oo ka dhan ah Maxamed bin Nayef, taasi oo uu taa jkiisa uga ilaashanayo dha xal sugihii hore, sida ay ba ahisay Washington Post.
Wargeyska ayaa weriyay "in guddiga la da gaalanka musuq maasuqa” uu salka u dhigi doono eedaha ka dhanka ah Bin Nayef oo la sheegay in uu malaayiin dollar u xawilay shirkado iyo akoono gaar ah, markii uu mas uulka ka ahaa wasaradda arrimaha gudaha.
Ilo-wareed ayaa wargeyska u sheegay in dhaxal sugihii hore la weydiin doono in uu dib u bixiyo $15 billion oo ay sheegeen in uu xaday.
La-taliyeyaasha dhaxal sugaha ayaa ka soo horjeestay eedaha, iyagoo sheegaya in shaqadiisii wasaaradda loogu ogolaaday wa reegto boqortooyo oo soo baxday sanadkii 2007-dii. Qoraallo uu wargeyska siiyay mid ka mid ah kaaliyeyaasha Bin Nayef ayaa tag eeraya sheegashada ah in dhaq-dhaqaaqi isii maaliyadeed la ogolaaday, uuna ogolaa day boqorkii hore.
Wareegtada oo ay aragtay The Post wax aa ay sal u tahay sanduuq uu maamulayay Bin Nayef waxayna ogolaneysay in la abu uro hal abuur ku haboon ganacsiga gaarka loo leeyahay si muuq kale loogu yeelo hind isaha argagixiso la dirirka. Warbixin qarash bixin ah oo soo baxday sanadkii 2013-kii ay aa muujisay codsiyo ah in la kharash gare eyo $1.3 billion oo uu ogolaaday Khaled al-Tuwaijri oo ah gudoomiyaha maxkamadda boqortooyadda.
Saraakiil horay uga tirsanaa CIA-da ayaa sheegay in ay ka warqabeen sanduuqa sirta ah ee argagixiso la dirika ee uu maamulayay Maxamed bin Nayef akoonadda uu u isti cmalay si uu u weeciyo mashruucyo ay wad ajir u fuliyeen Mareykanka iyo Sacuudiga.
Qoraal kale oo ay aragtay The Post, ayuu bin Nayef ugu sheegay la-taliyeyaashiisa in abuurista Shirkado aan jirin, uuga dayanay sida ay sameeyaan hey’adaha caalamiga ah ee amniga.”
Sarkaal hore oo Mareykanka u joogay Ri yadh ayaa sheegay "in qof kasta oo Dowlad da Mareykanka ka tirsanaa uu fahamsanaa in Bin Nayef uu lahaa awoodda ugu weyn ee kharash-gareynta boqortooyadda.”
R/ Wasaare Ku xigeenka oo xariga ka ja ray fagaaraha Midnimada
R/Wasaare ku-xigeenka dalka Md. Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa Shalay xariga ka jaray fagaaraha Midnimada oo la ga hir geliyay xaruntii hore ee Baarlamaanka oo ah xaruntii midnimada Koonfur iyo Waqooyi. Md.Guuleed oo guul taa riikhi ah ku tilm aamay xarig jarka ayaa cadd ieyay in fagaar ahan oo astaan u ah midnim ada Waqooyi iyo Koonfur uu noqon doono meel dadweynu hu ku nastaan oo dhallinyar adu ka ogaada an midnimada iyo dadaalkii loo soo maray.
Jardiinooyika fagaaaraha ayaa lagu muj iyay sida magaalooyinka waqooyi iyo Koonf ur loo mataaneeyay xilligii ay goballada waq ooyi iyo Koonfur ay midoobe en 1960-kii.
Diyaarad sida ciidamo boolis ah oo goor dhow ka soo qaaday Dhuusamareeb
Wararka ka imaanaya G/Galgaduud ay aa sheegaya in ciidamo badan oo ka tirsan Booliska soomaaliya, gaar ahaan kuwa Har amcad ay Shalay ay diyaarad ka soo qaad ay garoonka diyaaradaha ee M/ Dhuusamar eeb.Ciidamadan ayaa tiradooda waxaa ay gaaraysaa Ku dhawaad 200 oo askari, kuwa asi oo dib loogu soo celiyay M/Muqdisho oo markoodii hore laga qaaday.
Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib ma rkii dalab uu ka yimid madaxweynayaa sha maamulada Jubbaland iyo Puntland, kuwa asi shuruud ka dhigay bixitaanka ciidamada si ay kaga soo qayb galaan shirka ka dhac aya magaalada Dhuusamareeb Ammaanka M/Dhuusanareeb ayaa Shalay aad loo ad keeyay, iyadoona wadooyinka la dhigay ciid amo aad u fara badan, kuwaasi oo sugaya amniga madaxda dowlad gonoleedyadaX IGASHO:-RADIOKULMIYE.NET
Wafdi kale oo gaaray M/ Dhuusamareeb
Xildhibaano ka tirsan 2da Aqal ee Baarl amaanka Soomaaliya ay aa Shalay gaaray M/Dhuusamareeb ee Ca as imadda Dowlad Gobol ee dka Galmudug, iyada oo siwyen hal kaasi loogu soo dha weeyay.
Xubnaha Wafdiga ay aa waxaa kamid ah, Xil dhibaan Mustaf Dhuxul ow iyo Xildhibaan Xasan Yare & Yuusuf Dha geyiyo Dhadheer oo ka tirsan Xildhi banana da Aqalka Sare, waxaana ay ka qeyb-geli do onaan Shirka Madax da Dowlad goboleedya da oo ka furmaya Dhuusamareeb.
Madaxweynaha Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu hogagaminayay ayaa Dhuusamareeb uga sii horeeyay Xil dhibaanadaan,waxaana sidoo kale la filayaa in uu Shalay gaaro Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. Madaxweynaha Pu ntland oo ciidamo amnigi isa suga u diray Dhuusomareeb
Xaaladaha Coronavirus ee dalka laga diiwaangeliyay
Wasaaradda Caafimaadka Somaliya ay aa shalay ka warbixisay xaaladihii ugu dam beeyay COVID-19 ee dalka laga xaqiijiyay, afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in dal ka laga dii waangeliyay 13 xaala dood oo cusub, kuwaa oo into da badan laga xaqiijiy ay Gobolka Banaadir.
7 ka mida bukaanada cu sub ayaa ku sug an Gobol ka Banaadir, iyadoo 4 ku sugan yih iin Punt land, halka 2-da kalana laga diiwaa ngeliyay Somaliland.
Sida qoraalka lagu sheegay 9 ka mida bukaanada cusub waa rag,4-na waa hawen, waxayna wadarta guud ee xanuunka dalka laga diiwaangeliyay ka dhigeysaa 3,028 qof.
Sidoo kale qoraalka ayaa waxaa ku cad inay xanuunka ka bogsadeen 51 qof, taa oo tir ada guud ee xanuunka ka bogsatay guud ah aan dalka oo dhan ka dhigeysa 1,147 qof.
24-kii saac ee ugu dambeysay ayaa wax aan jirin xaalado dhimasho ah oo dalka laga diiwaangeliyay, waana maalintii 4aad oo xiri ir ah, oo aan dalka laga soo warin xaalado dhimasho oo ka dhashay COVID-19, inkas too ay horey ugu geeriyoodeen dad ay tirad oodu gaareyso 92 qof.
Toddobadyadii ugu dambeeyay ayaa wax aa si weyn hoos ugu dhacay xaaladaha dalka laga diiwaangelinayo, taasi bedelkee dana ay isa soo tareyso tirada xanuunka ka bogsaneyso.
Midowga Yurub oo Maraykanka Hanjaba ad Hawada U Mariyay
Waa xurguftii ugu dambeysay ee dhanka ganacsiga ee u dhaxeysa Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub, kaas oo salka ku haya ga nacsiga labada dhinac iyo culeysyada soo fo od-saaray, Inkabadan 10 sano, Mareykanka iyo Yurub ayaa isku eedeynayay in midba midka kale uu saaray canshuur dheeraad ah.
Bishii lasoo dhaafay, Mareykanka ayaa ku hanjabay in badeecadaha Yurub laga kee no ee dalkiisa la geeyo sida khamriga uu ca nshuur dheeraad ah saari doonaa, go’aanka as oo ka careysiiyay dalalka Yurub.
Haseyeeshee hanjabadaas waxaa ka ha dlay madaxa midowga Yurub u qaabilsan arr imaha ganacsiga, Phil Hogan oo sheegay in xukuumadda Washington ay ku gacanseyr tay dedaal la doonayay in xal looga gaa ro is marinwaaga u dhaxeeya labada djhinac.
"Waxaan rabaa in aan dadka u xaqiijiyo in aan diyaar u nahay in aan si adag uga jaw aabno haddii Mareykanka wixii aan fileynay aan ka weyno, taas oo la xiriirta muranka 15 sano ee lasoo dhaafay soo jiitamayay,” ayuu yiri Hogan oo la hadlayay guddiga baarlama anka Yurub u qaabilsan arrimaha ganacsiga.
Hey’adda ganacsiga adduunka ee WTO ay aa horay sharci darro ugu tilmaamtay lacago uu Mareykanka dul saaray shirkadda diyaar adaha sameysa ee Yurub.
Shilay dad ku dhinteen oo ka dhacay duleedka Hargeysa
Shilkana oo ahaa mid gaari ayaa waxaa uu ka dhacay deegaanka Isha gobka ee du leedka Koonfureed ee Hargeysa, waaxana shilkaasi ka dhashay khasaaro isugu jira dhim asho iyo dhaawac.
Shilka ayaa yimid, ka dib markii ay isku dhace en laba gaari oo mid kamid ah ay la socdeen saraakiil ka tirsan Ciidamada Booliska Soom aaliland,waxaana shilkaasi ku dhintay laba Ruux oo mid kamid ah uu yahay sarkaal ka tirsan Ciidamada Booliska Soomaaliland oo lagu Magacaabi jiray G/le Badel Xasan Qayl.
Wariyeyaal tegay goobta uu shilka ka dhacay ayaa sheegay in sidoo kale shirkaasi ay ku dhaawacmeen 3 ruux oo kala saarnaa 2da gaari,isla markaana gawaarida uu soo gaaray burbur xoogan.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soom aaliland ayaa gaaray